प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा आउनै छोडे बिरामी – Health Post Nepal
२०७७ भदौ १६ गते ११:२४
सामान्य अवस्थामा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा सेवा लिन आउने बिरामीको भीड थेगी नसक्नु हुन्थ्यो । तर, त्यही अस्पताल अहिले सुनसान प्राःय छ । उता नीजी अस्पतालहरुले पनि अनेक बहान देखाइ सजिलै भर्ना नलिएका कारण बिरामी हैरानी खेप्दै एकपछि अर्को अस्पताल धाउँदै हिँडेका छन् ।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार प्रादेशिक अस्पतालमा स्वास्थ्यसेवा लिन आउने बिरामीको संख्या अघिल्ला वर्षहरुमा दैनिक करिब ४०० देखि ५०० हुन्थ्यो । तर, यस वर्ष उपचारको लागि आउने बिरामीको संख्या ६० देखि ७० प्रतिशतले घटेको छ । आकस्मिक सेवा लिनसमेत बिरामी कमै आइरहेका छन् । प्रसुति तथा शिशु स्याहार लिन आउनेको संख्या विगतका वर्षहरुमा भन्दा करिब ९० प्रतिशत जति घटेको छ ।
प्रादेशिक अस्पतामा कोरानाका शंकास्पद बिरामी उपचारका लागि भर्ना भएका तथा अस्पतालका चिकित्सकसहित स्वास्थ्यकर्मीहरु समेत कोरोना संक्रमित भएका समाचार बाहिर आएपछि बिरामीहरु यस अस्पतालमा उपचारका लागि आउन डराएका छन् । कोविड–१९ उपचार केन्द्र अस्पताल छेउकै नर्सिङ क्याम्पसको भवनमा राखिएकाले बिरामीहरु उपचारको लागि त्यहाँ जाँदा संक्रमित हुनसक्ने त्रासमा देखिएका छन् ।
लकडाउन सुरु भएयता यस अस्पतालमा सेवा लिन आउने मध्ये प्रसुति गराउन आउनेको संख्या सबैभन्दा धेरै घटेकोे छ । प्रादेशिक अस्पतालका कोभिड संयोजक एवं बालरोग प्रमुख डा. जामुन सिंह प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार गराउन आउनेको संख्या घटेको बताउँछन् ।
‘लकडाउन’ का कारण सवारी साधन सञ्चालन नहुनुका साथै कोरोना संक्रमणको एकखाले त्रासका कारण उपचारको लागि आउने बिरामीको संख्यामा कमी देखिएको उनको भनाइ छ ।
डा.सिंह अन्य बिरामीभन्दा प्रसुति गराउन आउनेको संख्यामा ज्यादै कमी आएको बताउँछन् । विगतको भन्दा अहिले प्रसुतिका लागि आउनेको संख्यामा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा कमी आएको उनको भनाइ छ ।
‘लकडाउनयता यस अस्पतालमा प्रसुति सेवा लिन आउने महिलाको संख्या निक्कै घटेको छ,’ सिंह भन्छन्,‘अधिकांशले घरमै प्रसुति गराइ रहेका छन् भने थोरैले स्थानीय बर्थिङ सेन्टर प्रसुतिका लागि प्रयोग गरेका छन् ।’
लकडाउनको समयमा नवजात शिशु मृत्यु दर पनि बढेको आशंका गर्न थालिएको छ । अस्पतालमा प्रसुति गराउनेको संख्यामा कमी आएपछि नवजात शिशु मृत्यु दर बढेको डा.सिंह स्वीकार गर्छन् । ‘यकिन तथ्यांक त अहिले भत्र सकित्र तर, घरमै प्रसुति हुनथालेपछि नवजात शिशु मृत्यु दर वृद्धि भएको केही जर्नलहरुले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनबाट थाहा पाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।
बिरामी नवजात शिशुलाई अस्पतालमा सेवा लिन नल्याएका कारण उपचार अभावमा घरैमा शिशुको मृत्यु हुने खतरा बढी भएको छ डा.सिंहले बताए ।कोभिडको बेला नवजात शिशु स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर सेवा अगाडी बढाउनु पर्नेमा जोड दिँदै सिंह भन्छन्, ‘हामीले बालमृत्युदर घटाउन धेरै पसिना बागएका छौँ र बालमृत्युदर घटाउने लक्ष्यमा ठूलो सफलता समेत पाइसकेका छौँ ।
कोभिडका कारण स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुति गराउने महिलाको दर घट्दै गए हामी फेरी पहिल्यैको अवस्थामा फर्कन सक्छौँ । यो हाम्रा लागी अत्यन्त ठूलो क्षती हुन सक्छ ।’ सुरक्षित प्रसुतीले नै नवजात शिशुको जीवन सुरक्षित बनाउन सक्ने हुँदा यसलाई महत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अस्पतालमा आउने बिरामीको संख्यामा कमी आएपनि खोपलगायतका अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुमा भने खासै प्रभाव नपरेको सिंहले बताए । कोरोना संक्रमित महिलाको प्रसुति गराउन अस्पतालमा विशेष व्यवस्था गरिएको डा.सिंहले जानकारी दिए ।
कोरोना पोजेटिभ भएकी महिलालाई प्रसुति गराउन छुट्टै कोठाको व्यवस्था गरिएपनि हालसम्म कोराना सक्रमित महिला प्रसुतीका लागी नआएको अस्पतालकी मेट्रोन सन्ध्या दास बताउँछिन् । गत वर्ष प्रसुति तथा नवजात शिशु कक्षका सबै स्वास्थ्यकर्मीले प्राप्त गरेको ‘हेल्पिङ बेबी सर्भाइभ’ तालिमले प्रसुतिमा ठूलो सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।
अस्पताल प्रसुति गराउने महिलाहरुको संख्या कम भएकाले राम्रो सेवा सुविधा पाइरहेको दासको भनाइ छ । अस्पतामा सेवा लिन आउने बिरामीको संख्यामा कमी आउनु सिमान्तकृत समूह स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित हुनु हो उनको तर्क छ ।
कोभिडकै कारण उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल आउन नहुने डर सबैले हटाउनुपर्ने कोभिड केन्द्रका फोकल पर्सन डा. रामदेव चौधरी बताउँछन् । कोभिड बिरामीहरुका लागि आइसोलेसनको छुट्टै व्यवस्था गरिएकोले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।